ပင်မစာမျက်နှာ » နောက်ဆုံးရဆောင်းပါးများ » စီးပွားရေးခရီးသွား » ယနေ့ဂျေရုဆလင်မြို့ဟောင်းသို့လုံးဝနီးပါးလည်ပတ်ပါ
နိုင်ငံတကာသတင်းများ • စီးပွားရေးခရီးသွား • ပညာရေး • Breaking News အစ္စရေး • သတင်း • လူပုဂၢဳိလ္မ်ား • ခရီးသွား Destination Update ကို • Travel ကြေးနန်းသတင်းများ • ယခုခေတ်စား • သတင်းမျိုးစုံ
ဂျေရုဆလင်မြို့ဟောင်းကိုလမ်းလျှောက်ခြင်းကအများဆုံးမမေ့နိုင်သောခရီးဖြစ်သည်။ COVID-19 သည်ကမ္ဘာကြီးကိုပိတ်ပစ်လိုက်သောကြောင့်ဤခရီးစဉ်နီးပါးရနိုင်သည်။
ကမ္ဘာ့ခရီးသွားလုပ်ငန်းကွန်ယက် Virtual Tourism ကိုထောက်ပံ့သည်
zoom အပေါ် Virtual ခရီးစဉ်သည်အကျပ်အတည်းကိုကျော်လွှားနိုင်ရန်ဒေသခံ gu ည့်လမ်းညွှန်များကိုကူညီပါ
ဂျေရုဆလင်မြို့ဟောင်းကို ၁ နာရီကြာလည်ပတ်နိုင်သည့်ခရီးစဉ်အတွက်နှစ် ၅၀၀၀ သမိုင်းကြောင်းဖြင့်လမ်းညွှန်နှင့်စကားပြောပါ။
Amazing Jerusalem ၏ Boutique tour သည်inသရေလအမျိုး၌နံပါတ်တစ်အတွေ့အကြုံဖြစ်သည်။ ငါတို့သည်သင်တို့ကိုမကြာမီထပ်မံပူဇော်ဖို့မျှော်လင့်ပါတယ်။ ထိုအချိန်အထိကျွန်ုပ်တို့၏ virtual tour သို့သင်ဝင်ရောက်နိုင်သည်။
ဤခရီးစဉ်တွင်သင်သည်ဓာတ်ပုံများ၊ ကာတွန်းများ၊ ဝေဟင်မှဓာတ်ပုံများနှင့်မောင်းသူမဲ့လေယာဉ်များအားကြည့်ရှုနေစဉ်ယေရုရှလင်၏သန့်ရှင်းသောနေရာများကိုသင်တွေ့ကြုံခံစားနိုင်မည်ဖြစ်သည်။
စီးတီး Citadel ကင်းစောင့်
ဘုရားကျောင်းတောင် (ကျောက်ခုံးနှင့် al-Aqsa ဗလီအပါအ ၀ င်)
ဤခရီးစဉ်သည်ဘာသာရေးသုံးခုဖြစ်သောဂျူးဘာသာ၊ ခရစ်ယာန်ဘာသာနှင့်အစ္စလာမ်ဘာသာအတွက်အသန့်ရှင်းဆုံးနေရာများကိုဖုံးလွှမ်းထားပြီး ၁ စတုရန်းကီလိုမီတာကျယ်သောမြို့ရိုးအဟောင်းဂျေရုဆလင်မြို့တည်ရှိသည်။
Virtual guided tour - ဂျေရုဆလင်မြို့၏ရှေးဟောင်းမြို့၏ကောင်းမွန်သောခြုံငုံသုံးသပ်ချက်။ Amit ဟာမြို့ဟောင်းကိုကောင်းကောင်းမွန်မွန်နဲ့စနစ်တကျတင်ဆက်ပြသခြင်းကိုစီစဉ်ခဲ့သည်။ ပထဝီအနေအထားအရမြေပုံများနှင့်မော်ဒယ်များပေါ်တွင်ကောင်းစွာတည်ရှိနေကြောင်းသူကသေချာစေခဲ့သည်။ သူသည်ကျွန်ုပ်တို့အားမြို့၏သမိုင်းကြောင်းကိုလမ်းညွှန်ရန်အချိန်ဇယားသို့ပုံမှန်ပြန်လာပြီးဘာသာတရားအမျိုးမျိုးအတွက်နေရာအမျိုးမျိုး၏အရေးပါမှုကိုရှင်းလင်းစွာရှင်းပြခဲ့သည်။ ဒါဟာမြို့ရဲ့အလွန်ကောင်းတဲ့ virtual ခြုံငုံသုံးသပ်ချက်ဖြစ်ခဲ့သည်။
Israelသရေလအမျိုး၏“ ခရီးစဉ်များ” ငါသည်ဤvirtualသရေလအမျိုး၏ဤကို virtual ခရီးစဉ်သုံးခုယူကြပြီ, သူတို့ကအံ့သြစရာပဲ! Corona အချိန်ကာလသည်“ ခရီးသွားခြင်း” အတွက်ကောင်းမွန်သောခရီးဖြစ်သည်။ …ငါ၏ tour ည့်လမ်းညွှန်များသည် Amit နှင့် Dorit ဖြစ်သည်။ သူတို့နှစ် ဦး စလုံးသည်ဒေသနှင့်ofသရေလသမိုင်းကြောင်းကိုအလွန်သိရှိပြီးထိုခရီးစဉ်ကိုရှင်သန်စေနိုင်သူဖြစ်သည်။ မည်သည့်မေးခွန်းများကိုမဆိုသူတို့ဖြေဆို၊ အားပေးသည်၊ ဖော်ရွေသည်။ ငါကပိုယူဖို့စီစဉ်! "
ယေရုရှလင်မြို့ကိုအသက်ပြန်ရှင်လာသည် - ဤအကြံပြုချက် ဤသည်ယနေ့ည Zoom ကိုအပေါ်ကို virtual ခရီးစဉ်ဖြစ်ခဲ့သည်။ Amit ဟာဗဟုသုတများစွာရှိတဲ့အံ့သြစရာကောင်းတဲ့လမ်းညွှန်တစ်ခုပါ။ ငါခရီးစဉ်စုံတွဲတစ်တွဲတွင်ရှိခဲ့ပြီးနောက်တစ်နှစ်တွင်ကျွန်ုပ် ဦး ဆောင်နေပြီး၊ ယနေ့ညကျွန်ုပ်ကောက်ယူခဲ့သောအချက်အလက်များသည်အလွန်အထောက်အကူပြုခဲ့သည်။ သူသည်ချာ့ချ်များသည်မည်သည့်နေရာတွင်ရှိသည်၊ ဂျေရုဆလင်ရှိဒေသများ၏အရေးပါမှုနှင့်ကျမ်းစာရည်ညွှန်းချက်များအကြောင်းရှင်းလင်းစွာရှင်းပြခဲ့သည်။ အကောင်းဆုံးနာရီကုန်ဆုံးခဲ့သည်။
ကမ္ဘာ့ခရီးသွားလုပ်ငန်းကွန်ယက်တစ်ခုစတင်ခဲ့သည် Virtual ခရီးသွားလုပ်ငန်းအတွက်အကျိုးစီးပွားအုပ်စု နှင့်ခရီးသွား gu ည့်လမ်းညွှန်များကိုပံ့ပိုးရန်အဖွဲ့တစ်ဖွဲ့။
ကမ္ဘာ့ခရီးသွား Association ည့်လမ်းညွှန်အသင်းအဖွဲ့ချုပ် WTN နှင့်ပြန်လည်တည်ဆောက်ခြင်းခရီးသွားခြင်းသည်ဖေဖော်ဝါရီ ၁၅ ရက်တွင်ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာ virtual ပွဲတော်သို့ဖိတ်ကြားခြင်းဖြစ်သည်။